Nchịkọta nke ga - enyere gị aka inwekwu mmasị na Instagram na Martech Zone
Satọde, Satọdee 13, 2014 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Izu ole na ole gara aga, Jenn Lisak na Dave - onye a makwaara dị ka Kewiki - gbasara usoro nkwukọrịta ọhụụ na ntanetị. Ọ bụrụ na ịgbasoghị Kewiki… Akaụntụ ya ga-agbaso. Ọ na-eru nso otu ụzọ n'ụzọ anọ nke nde ndị na-eso ụzọ ya na ọrụ ọhụụ dị egwu ọ na-etinye n'ịntanetị kwa ụbọchị ga-ewepụ ume gị. Dave bụ ezigbo ihe atụ nke otu esi etinye aka na Instagram! Mgbalị ya itinye aka eduga ya na-arụ ọrụ gburugburu ụwa.
N'ezie, abụkwara m onye na-agba Dan Dan Zarrella ogologo oge, onye na-etinyekarị data na anya nke na-enye echiche dị iche na data. M na-ahapụkarị ihe atụ ya na ajụjụ ndị ọzọ karịa nkwubi okwu - ekwenyere m na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ọ na-anwa imezu.
Adị m oge na-adịbeghị anya na-anakọta nnukwu nchekwa data Instagram ma nyochaa ya iji mata njirimara ndị na-eme ka onyonyo rụọ ọrụ (ma ọ bụ na ọ naghị arụ ọrụ). Ihe si na ya pụta bụ infographic n'okpuru. Y’oburu n’acho ima ihe ojoo nke dataset, enwere nkọwa di na ala ya. Dan Zarrella, Sayensị nke Instagram
Offọdụ nchoputa ahụ dị ịtụnanya… dịka ma ọ bụ na etinyereghị ihe onyonyo n'iji ya rụọ ọrụ dị iche iche na ntanetị nke Instagram ma ọ bụ karịa. Ma obu foto edere na nkpado ozo na aru oru. Ma foto nke dị mgbagwoju anya ma ọ bụ na-erughị ala. Ma ejiri onyo ochichiri ma o bu ihe onyonyo kerita. Ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụ ịkpọ oku iji rụọ ọrụ na nkọwa gị ga-eme ka ị nwekwuo mmasị. Nsonaazụ ga-eju gị anya!
Tags: Dan zarrellainfographicinstagramntinye aka na instagraminstagram na-esoihe ngosi instagraminstagram amasịstats instagraminstagram azuminstagram echichekewikisayensị nke instagram